पूर्व राजपाका सचिव पासवानद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा
सर्लाही, ४ कात्तिक । मधेशका जनताको अधिकार र समृद्धिको नारा लगाएका मधेसकेन्द्रित दल, पद र पैसाको पछि लागेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा बैठक सुरु
काठमाडौं, ३ कात्तिक । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सोमबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक आजबाट
काठमाडौं, ३ कात्तिक । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सोमबारबाट ललितपुरमा बस्दैछ ।
जसपा नेता वृषेशचन्द्र लाललाई कोरोना
काठमाडौं, २ कात्तिक । जसपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद वृषेशचन्द्र लाल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्
भूमि अतिक्रमणबारे सरकारको भनाइ अपरिपक्वः काँगे्रस नेता सिंह
काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले आफ्नो भूमिसमेत दाबी गर्न नसकेको बताएका छन् ।
चीनको अतिक्रमणमा सरकार मौन : काँग्रेस
काठमाडौं, २९ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल र चीन सीमाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् : भीम रावल
काठमाडौं, २७ असोज । नेकपाका नेता भीम रावलले नेपाल र चीन सीमा समस्याबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेश २ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त : मातृका यादव
जनकपुरधाम, २५ असोज । पूर्वउद्योग तथा आपूर्तीमन्त्री तथा नेकपाका नेता मातृकाप्रसाद यादवले प्रदेश २ को सरकार चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सर्लाहीमा २५० भन्दा बढी कांग्रेसमा प्रवेश
सर्लाही, २५ असोज । सर्लाहीको क्षेत्र न.४ को रामनगर गाउँपालिका वार्ड न. ५ विर्ताटोलमा नेकपासहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरेका २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
काठमाडौं, २४ असोज । साझा पार्टीले छ महिनादेखि सहप्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य शरदराज पाठकलाई प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ ।
काँग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने
काठमाडौं, २३ असोज । नेपाली काँग्रेसको फागुनमा हुने १४औँ महाधिवेशन सर्ने भएका छ । कोरोना संक्रमणका कारण महाधिवेशन तयारी गर्न कठिन भएपछि महाधिवेशन सर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रदेशको नाम जाति र भाषाबाट राख्‍न बाबुरामको सुझाव
काठमाडौं, २१ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेशका नाम जात, भाषाको पहिचानमा आधारमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक नियुक्ति एउटै समुदायबाटः जसपा अध्यक्ष यादव
राजविराज, १९ असोज । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गरी सबैको अपनत्व हुने खालको वातावरण नबनेसम्म सचेत युवाले खबरदारी गरिरहनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डका विचारहरुको संग्रह ‘नयाँ युगको पदचाप’ सार्वजनिक
काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सरकार प्रमुखका रुपमा व्यक्त विचारहरुको संग्रह ‘नयाँ युगको पदचाप’ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज १९ गते बस्ने
काठमाडौं, ६ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी असोज १९ गते बस्ने भएको छ ।
नेकपा नेतासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूतको भेट
काठमाडौं, २ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भेट गरेका छन् ।
जसपामा ७०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
काठमाडौं, २१ भाद्र । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ७०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने भएको छ । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएपछि हालसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन ।
१० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाउन जसपाको माग
काठमाडौं, १४ भाद्र । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावका लागि तोकिएको १० प्रतिशत थ्रेडहोल्डलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा राख्न माग गरेको छ ।
जसपाको समायोजन निर्देशिका तयार
काठमाडौं, ७ भाद्र । राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )ले समायोजन निर्देशिका तयार गरेको छ । पार्टीको सचिवालयले तयार पारेको निर्देशिका जिल्लमाा समेत पठाइएको छ ।
विप्लव माओवादीका ८८ नेता कार्यकर्ता जनता समाजवादीमा प्रवेश
काठमाडौं, ७ भाद्र । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ८८ जना नेता कार्यकर्ताहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् ।
निलम्बित सांसद रौनियारद्वारा निलम्बनको जवाफ माग
काठमाडौं, ४ भाद्र । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद हरिनारायण रौनियारले संसद्ले आफूलाई के कारणले निलम्बनमा पारेको भन्ने विषयमा जवाफ माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।
जसपा नेपालद्वारा १२ बुँदे आचारसंहिता जारी
काठमाडौं, २८ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका लागि आचार संहिता जारी गरेको छ ।आचारसंहिता अनुसार नेता र कार्यकर्ताले अब जथाभावी बोल्न तथा लेख्न पाउने छैनन् ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चारदिने बैठकको १० निर्णय
काठमाडौं, २६ साउन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक साउन २१-२४ सम्म अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा ललितपुरमा सम्पन्न भयो । बैठकले समायोजन निर्देशिका, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको दायित्व, समसामयिक प्रस्तावहरु र आचारसंहिता लगायतका कार्यसूचीहरु माथि छलफल गरी निम्नानुसारको निर्णयहरु लिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई खुल्ला पत्र
पार्टीको अध्यक्ष नै पार्टीको विधि विधान पालना गर्न नचाहने मात्र होईन कि चाहे अनुसारको पद न पाए वा नरहे कुर्सी नै भांचिदिन्छु भन्ने कुराहरु संचारमा आउने कुराले नेकपाको सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई नै झसङ्ग पारेको छ । पार्टी भित्रको विवाद सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीमा मेन्सेभिक र बोल्सेभिकको विवाद जस्तो देखिएको छ ।
नेकपाभित्रको विग्रह रोक्न वामदेवको ६ प्रस्ताव
काठमाडौं, १३ साउन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चरम उत्कर्षमा रहेको विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसमक्ष ६ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।